YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, April 10
တရုတ်ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ခဲ့သော ရွှေလီရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ တာဘိုင်စက်တစ်လုံးမှ ထွက်ရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများကို ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖူလုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနမှ ဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ခိုင်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါရွှေလီရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် လျှပ်စစ်တာဘိုင် ခြောက်လုံးရှိပြီး လောလောဆယ် နှစ်လုံး ဝယ်ယူထားပြီး နောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်မံ၍ အမြန်ဆုံး ဝယ်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“ရန်ကုန်မှာ မီးမရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ် လုံလုံ လောက်လောက် ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်”ဟု ၎င်းကဆက်လက်ဆိုသည်။
BY YeYint Nge ... 4/10/2012 1 comment
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်လွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အမှုဆောင်သစ်အဖွဲ့၊
Uploaded by RFABurmeseVideo on 10 Apr 2012
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်
(ဧပြီ ၁ဝ ရက် ၂ဝ၁၂)
- မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့သစ်ကို တရားဝင် တာဝန် လွှဲပြောင်းပြီ၊
- ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လျှော့ပေါ့ရေး အမြန် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြော၊
- "လူထုခေါင်းဆောင်" ကနေ "နိုင်ငံရေးသမား" ဖြစ်လာတော့မှာကြောင့် ရှေ့ခရီးလမ်း ခက်ခဲမယ့်အကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton ပြောကြား၊
- ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် သောကြာနေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမည်၊
- ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ် Vijay Nambir လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ တင်မည်၊
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန် Holocaust Memorial ပြတိုက်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ချီးမြှင့်မည်၊
- စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနဲ့ ကရင်နီပြည်နယ် လူငယ်များ သဘောတူ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်၊
- NLD နာယက ဦးတင်ဦးနဲ့ အဖွဲ့ တောင်ဥက္ကလာ ဟေမဝန်ဈေး မီးဘေးသင့် ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကို သွားရောက် တွေ့ဆုံ၊
- ၂ သိန်းတန် GSM လက်ကိုင်ဖုန်း စတင်ရောင်းချ၊
- NLD ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးပေးခဲ့သည့် အနုပညာရှင်များကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ပြု၊
... စတဲ့ သတင်းတွေနဲ့
- ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်လွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး အမှုဆောင်သစ်အဖွဲ့၊
- ပြည်ပက ကားအသစ် သွင်းခွင့်ရဖို့ ကားဟောင်း ပြန်အပ်သူတွေ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲများ။
- စသုံးလုံး ဌာနချုပ်မှာ စစ်ဆေး ခံနေရချိန် အတွင်း တိုက်ပေါ်က လိမ့်ကျသေဆုံးခဲ့သူ နန်းဝိုးဖန်၊
- 'ဗေဒါ' အခမဲ့ စာသင်ကျောင်း တာဝန်ခံ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း၊
- မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ် (ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေတဲ့ မွန်ရိုးရာ တူရိယာ- မြန်မာဘာသာ စာတန်းထိုး)
... စတာတွေကို ဒီနေ့ ကြည့်ရှုရမှာပါ။
BY YeYint Nge ... 4/10/20120comment
(ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျောင်းသားဘ၀တွင် ရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါး) ၊
by Lu Maw on Tuesday, April 10, 2012 at 3:54am ·
အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီး ရှိတ်စပီးယားက "ကမ္ဘာအလုံးစုံသည် ဇာတ်ခုံမျှသာတည်း"ဟု မိန့်မြွက်ဖူး၏။ ထိုကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံတွင် လူအမျိုးမျိုး၊အရွယ်အမျိုးမျိုး၊ အတန်းအစားအမျိုးမျိုးတို့သည် ကိုယ့်အခန်းကို ကိုယ်ကိုင်၍ ဇာတ်နိုင်အောင် ခင်းသွားရလေသည်။သို့ဖြစ်ရာ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ သိကြားတတ်သောအချိန် အရွယ်မှစ၍သေသည်ထိအောင် မိမိ၏ အလုပ်ဝတ္တရားအဖြစ်ရှိ၏။ ထိုဝတ္တရားကို ကျေပွန်မှသာလျှင် လောက၌ လူဖြစ်ကျိုးနပ်ပေမည်။ ကမ္ဘာ၏နောက်ခေတ် အမွေခံဖြစ်သော ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတို့မှာလည်း အထူးသဖြင့်အသက် ၁၆နှစ် ၊ ၁၇ နှစ်မှ အထက်သို့ရှိသော ကျောင်းသားများမှာလည်း အဆိုပါဝတ္တရားဥပဒေမှ မကင်းလွတ်ကြချေ။ ယင်းဖြစ်လျှင် ကျောင်းသားဝတ္တရားသည် အဘယ်နည်း။
အမြင်ကျယ်ကျယ် ကြည့်လေ့ရှိသော သူတို့သည် ကျောင်းသားဆိုသည်မှာ အတန်းစာကျက်၍ စာမေးပွဲအောင်ရုံမျှ ဟူသော အများအယူအဆ တိမ်းခြင်းအဖြစ်ကို သိရှိကြလေပြီ။ ထိုအယူအဆကား ခေတ်အောက်ကျသည့် အယူအဆမျှသာဖြစ်ပေသည်။
စင်စစ်သော်ကား ကျောင်းတွင် တစ်ခါမျှမနေဘူး၍ စာတစ်လုံးမျှ မသင်ဖူးသူပင် ပညာရှိဖြစ်နိူင်၏ ။ ဤကားဖြစ်နိူင်သည့်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပေသည် ။ ယခု ကမ္ဘာပေါ်ရှိသည့် စာအုပ်အားလုံးသည် အရင်းစစ်လျှင် လောကအကြောင်းကို အမျိုးမျိုးမှတ်သားချက်များသာဖြစ်ပေသည်။ ထိုမှတ်သားချက်များကိုရေးသူများ၏အာဘော် ၊ ၄င်းတို့ရေးရာဒေသ ၊ ရေးသည့်အချိန်ကာလစသည်တို့ကိုကြည့်၍ ဝေဖန်ပြီးလျှင် လောကအလုပ်ဝတ္တရားတွင် သုံးစွဲတတ်မှသာ စာတတ်အမှန်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုပညာစစ်ကိုရရန် လွတ်လပ်စွာ တွေးတောပြောဆို ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်လိုသောစိတ် မွေးရန်လို၏ ။ဤအချက်ကို ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူ ပဂ္ဂိုလ်တို့က (Academic Freedom ) ပညာသင်ကြားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဟု ခေါ်ကြ၏ ။ ဤအချက်ကား ကမ္ဘာရာဇ၀င်ကို တစ်မျိုးတစ်မည် ပြောင်းလွဲစေသည့် ရီနေဆန် နှင့် ရီဖောင်မေးရှင်းခေါ် ခေတ်သစ်ဝါဒ လောကဓာတ်ပညာ ပြန့်ပွားရာ အကြောင်းအရင်းတည်း။ ဤအချက်ကားကျွန်ုပ်တို့၏ ဂေါတမဘုရားသခင် ဟောကြားသော ကာလမသုတ္တန် သဘောအရပင်တည်း။
ထိုလတ်လပ်စွာတွေးတော ပြောဆိုဆွေးနွေး လုပ်ကိုင်လိုသော စိတ်ရှိရမည်ဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိထင်ရာတွေးတောပြောဆို လုပ်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ပေ ။ လောကရှိ လူအပေါင်းတို့သည် ရေတွင်းတစ်တွင်းရှိ ဖားသူငယ်ကဲ့သို့နေ၍မဖြစ်ပေ ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူးလူးဆက်ဆံရလေသည် ။ယခုခေတ်အခါတွင် ဤသို့ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းမှာ ပိုမို၍ပင်ကျယ်ပြန့်လာလေသည်။ ယခု အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော ရှားပါးရေးခေတ်သည် ထိုဥပဒေကို လွန်ဆန်၍ ကိုယ်ဘက်ကိုယ့်သဘောကိုသာမြင်သော ၀ါဒကြောင့် ဖြစ်သော ကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ ပဲ့တင်သံဖြစ်လေသည် ။
The Lady ကြည့်ပြီးဟီလာရီရဲ့ မှတ်ချက်
Uploaded by statevideo on 10 Apr 2012
U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton delivers remarks at the screening of the Aung San Suu Kyi Biopic "The Lady," at the Motion Picture Association in Washington, D.C. on April 9, 2012. [Go to http://video.state.gov for more video and text transcript.]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တလောက သူတယ်လီဖုန်းပြောခဲ့စဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ လွှတ်တော်ထဲဝင်ရောက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့် နိုင်ငံရေးဟာ "စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာခြင်း တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးမှာ အပေးအယူလုပ်ရမယ့်" နိုင်ငံရေးသဘောမျိုး အဓိကဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါကလည်း ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ သဘောတရားလည်းဖြစ်တယ်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းအဖြေရှာခြင်း၊ အပေးအယူလုပ်ခြင်းဟာ ညစ်ညမ်းတဲ့ ဝေါဟာရမဟုတ်ပါဘူးလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
Motion Picture Association of America အမေရိကန်ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း အသင်းကြီးမှာ မနေ့က ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာ Luc Besson ရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘ၀ပုံရိပ်ကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Lady ရုပ်ရှင်ကား ပြသတဲ့ပွဲမှာ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောသွားတာပါ။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ မိမိနဲ့အမြင်သဘောထား လုံးဝမတူညီသူတွေနဲ့ အတူတကွ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စစ် ကလင်တန်က ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ အချိန်မရွေး ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေကရော အားလုံးကပါ လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်သလို၊ တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း ဒီမိုကရေစီခရီးစဉ်မှာ အားလုံးနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ သံဓိဋ္ဌာန်ဟာ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးအနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ထားရမယ့် အချက်ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောသွားပါတယ်။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့က NLD ရုံးချုပ်ရှေ့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံပါ။
ဓာတ်ပုံ - RFA
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေရာ သရုပ်ဆောင်နေရာအတွက်စိတ်ကြိုက်မတွေ့ သေးလို့ ထပ်လျောက်နိုင်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ 10 ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ၁၁/၂၀၁၂ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အရ သရုပ်ဆောင်သစ်ထပ်မံ ခေါ်ယူရန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
အခုအဆို​တော် ထူး​အယ်လင်း​နဲ့​ မီး​မီး​ခဲ၊အဆို​တော်လင်း​လင်း​တို့သီဆိုခွင့်ပါမစ်မရဖူးဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်အစိုး၇နောက်ကြောင်းပြန်
သင်္ကြန်တွင် အဆို​တော်အချို့ သီဆိုခွင့်​မရ
Published on April 10, 2012 by နော်နိုရင်း
မြန်မာ့​ရိုး​ရာမဟာသင်္ကြန်အတွင်း​ ​နေပြည်​တော်မှာ သွား​ရောက် သီဆို​ဖျော်​ဖြေမယ့်​ အဆို​တော်တချို့​ သီဆို​ဖျော်​ဖြေဖို့​ ကုမ္ပဏီနဲ့​ ကန်ထရိုက်ယူပြီး​မှ ပယ်ချခံခဲ့​ရပါတယ်။
လာမယ့်​ ၁၂ ရက်​နေ့​မှာ ​နေပြည်​တော်က ACE မဏ္ဍပ်မှာ ​ဖျော်​ဖြေမယ့်​ အဆို​တော် ထူး​အယ်လင်း​နဲ့​ မီး​မီး​ခဲ ခုလိုပယ်ချခံလိုက်ရတာလို့​ ကာယကံရှင်က ​ပြောပါတယ်။
​နေပြည်​တော်က ပါမစ်မ​ပေး​လို့​ လာစရာ မလို​တော့​ဘူး​လို့​ ပွဲကို စီစဉ်​ပေး​တဲ့​ အင်ဂျင်နီယာက အ​ကြောင်း​ကြား​လာတယ်လို့​ ထူး​အယ်လင်း​က ​ပြောပါတယ်။
“အပိတ်ခံရတယ်လို့​ ကျ​နော်တို့​ ​သေချာမသိဘူး​။ စား​ရင်း​တင်တဲ့​အထဲမှာ ကျ​နော်တို့​ မပါဘူး​။ ပါမစ်မ​ပေး​ဘူး​လို့​ ​ပြောတယ်။ ကျ​နော်တို့​လည်း​ တိတိကျကျသိ​အောင် ​သေချာစုံစမ်း​နေတယ်။ အနီး​ကပ်မှ ဖြုတ်လိုက်​တော့​ ကျ​နော်တို့​ဘက်က ​တော်​တော်​လေး​ ထိခိုက်တယ်။ ကျန်တဲ့​ကိစ္စက​တော့​ ကျ​နော်မ​ပြောတတ်ဘူး​။ ​ငွေ​ရေး​ကြေး​ရေး​က​တော့​ နစ်နာတာ​ပေါ့​။ ​တွေး​ကြည့်​ရင်း​နဲ့​ ပတ်ပြီး​ ဖြစ်​နေမှာစိုး​လို့​ ဘာမှကို မ​တွေး​တော့​ဘူး​။ ပယ်တယ်ဆိုရင်လည်း​ မတတ်နိုင်ဘူး​ပေါ့​။ မနက်ဖြန်ကျရင် ခရီး​စထွက်မယ်ဆိုပြီး​ အား​လုံး​ ပြင်ပြီး​နေမှ ဒီက​နေ့​ကျမှ သိတာ။”
ပုံမှန်အား​ဖြင့်​ သင်္ကြန်မှာ မဏ္ဍပ်​ဆောက်ပြီး​ရင် မဏ္ဍပ်ပါမစ်အရ ​ဖျော်​ဖြေခွင့်​ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ​ပေမယ့်​ဘာ​ကြောင့်​ သူတို့​ကို သီဆိုခွင့်​မရှိတာလည်း​ ဆိုတာကို မသိရဘူး​လို့​ ​ပြောပါတယ်။
မန္တ​လေး​မှာ ​ဖျော်​ဖြေမယ့်​ အဆို​တော်လင်း​လင်း​ကလည်း​ အလား​တူ အပိတ်ခံရတယ်လို့​ သိရပါတယ်။
မီး​ပူဖြင့်​ အကပ်ခံရသည့်​အမှု ရဲက လျစ်လျူရှု
Published on April 10, 2012 by ​အေး​နိုင်
ပဲခူး​မြို့​မှာ ​ရှေ့​နေအမျိုး​သမီး​တဦး​က သူ့​ရဲ့​ အိမ်​ဖော်က​လေး​ငယ်ကို မီး​ပူနဲ့​ကပ်လို့​ ဒဏ်ရာရရှိတယ်ဆိုတဲ့​သတင်း​ ပြည်တွင်း​ဂျာနယ်မှာ ပါလာ​ပေမယ့်​ အ​ရေး​မယူဘူး​လို့​ လိုက်ပါကူညီ​နေသူ​တွေက ​ပြောပါတယ်။
ဒုတိယ မြို့​နယ်တရား​သူကြီး​ ဦး​အောင်ဖုန်း​ဝင်း​ရဲ့​ ဇနီး​ ​ရှေ့​နေ ​ဒေါ်ဖြူဝင်း​သက်က အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အိမ်​ဖော် မ​အေး​ယု​အောင်ကို မီး​ပူတိုက်တာ ကြာလို့​ဆိုပြီး​ မီး​ပူနဲ့​ကပ်တာ လည်ပင်း​မှာ ဒဏ်ရာရတဲ့​အ​ကြောင်း​ က​လေး​မ​လေး​ရဲ့​ ​ပြောပြချက်ကို ကိုး​ကား​ပြီး​ ဂျာနယ်သတင်း​ထောက် ကိုရဲက ​ရေး​သား​ခဲ့​တာပါ။
သူတို့​ဇနီး​မောင်နှံဟာ ပဲခူး​မြို့​ ဥဿာမြို့​သစ်၊​ အမှတ် ၇ ရပ်ကွက်၊​ ဗိုလ်​တေဇလမ်း​ရှိ ပဲခူး​တိုင်း​ဒေသကြီး​ လွှတ်​တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး​ဝင်း​တင် အိမ်မှာ ငှား​နေကြတာဖြစ်တဲ့​အတွက် အရှိန်အဝါ​တွေ​ကြောင့်​ အမှုမလုပ်ရဲ​အောင် ဖြစ်​နေတာလို့​ ပတ်ဝန်း​ကျင်က ​ဝေဖန်​နေပါတယ်။
က​လေး​မရဲ့​လည်ပင်း​မှာ ဒဏ်ရာကျက်​နေတဲ့​ပုံကို ဓာတ်ပုံနဲ့​တကွ ဧပြီ ၄ ရက် ​နေ့​စွဲနဲ့​ ပြည်တွင်း​ဂျာနယ်တခုမှာ ပါပြီး​တဲ့​နောက် ရဲကစုံစမ်း​တယ်လို့​ သိရ​ပေမယ့်​ အမှုဖွင့်​ အ​ရေး​ယူ​ဆောင်ရွက်ခြင်း​ မရှိဘူး​လို့​ လိုက်ပါကူညီ​နေသူ​တွေက ​ပြောပါတယ်။
ဒီလို အနာတရဖြစ်​အောင် လုပ်ခဲ့​တာကို အပြင်ကို မ​ပြောဖို့​ က​လေး​ကိုပါ ခြိမ်း​ခြောက်ခဲ့​သေး​တယ်လို့​ အဲဒီသတင်း​က ဆိုပါတယ်။ ပဲခူး​မြို့​က လူမှု​ရေး​ ကူညီ​ပေး​နေသူ ဦး​ကြည်လင်း​က က​လေး​ကို ရဲစခန်း​ ကူညီပို့​ဆောင်​ပေး​ခဲ့​ပေမယ့်​ အမှုမဖွင့်​ဖြစ်ဘူး​လို့​ ​ပြောပါတယ်။
ရဲက တရား​သူကြီး​ ဦး​အောင်ဖုန်း​ဝင်း​ကို ​ခေါ်​မေး​ရာမှာ သူ့​ဇနီး​လုပ် မလုပ် သူမသိ​ကြောင်း​ ​ဖြေကြား​ပြီး​ က​လေး​မ​လေး​ မနစ်နာရ​လေ​အောင် ​ဆောင်ရွက်မယ့်​ အ​ကြောင်း​နဲ့​ က​လေး​မရဲ့​ မိဘ​တွေရှိရာ ပဲခူး​မြို့​ ​ကျောက်ကြီး​ ​ကျေး​ရွာကို ပို့​ဆောင်​ပေး​ဖို့​ ဦး​အောင်ဖုန်း​ဝင်း​က ​ခေါ်​ဆောင်သွား​တယ်လို့​ ဆိုပါတယ်။
ဒီမနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်​မှာ​တော့​ သတင်း​ထောက်ကိုရဲက ဒီသတင်း​အတွက် တရား​သူကြီး​ ဦး​အောင်ဖုန်း​ဝင်း​ထံကို သွား​ရောက်​မေး​မြန်း​ရာမှာ ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့​ ပတ်သက်လို့​ တစုံတရာ ​ပြောဖို့​မရှိ​ကြောင်း​ ​ဖြေဆိုခဲ့​တယ်လို့​ ကိုရဲက ​ပြောပါတယ်။
“​နောက်ဆုံး​အ​ခြေအ​နေက အခု တရား​သူကြီး​နဲ့​ ဝင်​တွေ့​လာတယ်။ ကျ​နော်​မေး​တဲ့​ ​မေး​ခွန်း​တွေကို ​ဖြေဆိုဖို့​ငြင်း​ဆန်တယ်။ အဲဒါ ​နောက်ဆုံး​ အ​ခြေအ​နေပဲ။”
ဒီကိစ္စကို အမှုဖွင့်​ မဖွင့်​ အမှတ် ၃ ရဲစခန်း​ကို ဆက်သွယ်​မေး​မြန်း​ရာမှာ တာဝန်ကျတဦး​က ဒီအမှု ဒီကိုလည်း​ လာမတိုင် အမှုလည်း​ မဖွင့်​ထား​ပါဘူး​လို့​ ​ဖြေပါတယ်။
လူမှု​ရေး​ လိုက်ပါကူညီ​နေသူ ဦး​ကြည်လင်း​က​တော့​ ဒီအမှုမျိုး​မှာ ရဲကသိရင် တရား​လိုအဖြစ် လိုက်ပါ​ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့​ ယုံကြည်​နေပါတယ်။
“ဒီအမှု​တွေက တရား​လိုမရှိရင် ရဲကတရား​လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျ​နော်တို့​လည်း​ အရင်က သ​ဘောသိပ်မ​ပေါက်ဘူး​။ အခုမှ သ​ဘော​ပေါက်တယ်။ အဲဒီလို ပြဌာန်း​ထား​တယ်ဆိုရင် ရဲအ​နေနဲ့​ လုပ်သင့်​တယ်လို့​ ထင်တာ​ပေါ့​။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမျိုး​သား​လူ့​အခွင့်​အ​ရေး​ကော်မရှင်က လိုက်ပါ ​ဆောင်ရွက်ဖို့​ကို ဦး​ကြည်လင်း​က လိုလား​နေပြီး​ မကြာခင် မ​အေး​ယု​မော်နဲ့​ မိဘ​တွေဆီ လိုက်​မေး​ပြီး​ အမှုမှန်​ပေါ်​အောင် ကူညီမယ်လို့​ ​ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံ​တော်သမ္မတနဲ့​ လွှတ်​တော်ဥက္ကဋ္ဌ​တွေက​တော့​ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရား​ဥပ​ဒေ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိ​စေရလို့​ အခါအခွင့်​သင့်​တိုင်း​ ​ပြောပါတယ်။
မနှစ်ကလည်း​ ပဲခူး​တိုင်း​ ဒိုက်ဦး​မြို့​နယ်မှာ အမျိုး​သမီး​တဦး​ကို ဆယ်စုနှစ်နဲ့​ချီပြီး​ အိမ်တွင်း​ထား​ပြီး​ ခိုင်း​စေတဲ့​သတင်း​ မီဒီယာ​တွေမှာ ပါ​ပေမယ့်​ ကာယကံရှင်တဦး​မှ တရား​တ​ဘောင် ရင်ဆိုင်ရခြင်း​ မရှိပါဘူး​။
Apr 10, 2012 6:17am
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးစည်းရုံးလှုပ်ရှားခဲ့သူ ကိုထင်ကျော်ဦးဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့နဲ့ တယ်လီဖုန်းဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်သွားပါတယ်။
မနန်းဝိုးဖန်း သေဆုံးမှု အမှုဖွင့်မရဖြစ်နေ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရုံးပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ မနန်းဝိုးဖန်း သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ချက်ဖွင့် တိုင်ကြားလို့ မရဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် ဦးအံ့ဘုန်းမြတ်က သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
NLD အောင်နိူင်ရေးတွင် ပါဝင် လှုံဆော်စည်းရုံးပေးခဲ့ကြသော ဂီတ၊ရုပ်ရှင် အနုပညာရှင် များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက တာဝန်လွှဲပြောင်းလိုက်တဲ့ မြန...
NLD အောင်နိူင်ရေးတွင် ပါဝင် လှုံဆော်စည်းရုံးပေးခဲ့...